သင် (သို့) သင့်ချစ်သူ နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင် – Tameelay
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့် 🎋🎋အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ်?🔮🔮
ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ :-p သူများကို ကူညီလိုက်လို့ ကိုယ့်မှာ သုညဖြစ်သွား ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သူတွေပါ📲🔈🔉
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ စေတနာလည်း အရမ်းကောင်းသလို သံယောဇဉ်လည်း အလွန်ကြီးကြတဲ့ သူတွေပါ။
🎆သူတို့ဟာ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လည်း လွယ်ပါတယ်။ ခဏခဏလည်း စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် တတ်ပါတယ်😩😫
စိတ်ကောက်လည်း ခဏပဲ။ ချော့မယ့်သူရှိရင်တော့ ဟန်အမူပိုပြီး ဆက်ပြီးတော့ စိတ်ကောက်ဟန်… ဆောင်နေတတ်ပါတယ် ။ချော့မယ့်သူ မရှိရင်တော့ သူ့အလိုလို ပျော့သွားရော😂
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူဟာ ချစ်သူအပေါ်မှာလည်း ကလေးတစ်ယောက်လို ဆိုးနွဲ့ချင်ကြပါတယ်။
🎋🎉🎊 အချစ်လည်း အရမ်းကြီးပါတယ်။🎈🎌🔮 ဒါပေမယ့် အချစ်စိတ်ကြီးတော့ ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ အပြစ်ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး နားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးနိုင်တဲ့ သူတွေပါ။ 🎤
🎤🎧🎧ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ မတင်မကျနဲ့ အမြဲသံသယ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဖြစ်ခဲ့သမျှ အတိတ်တွေကိုတော့ အမြဲ မမေ့ဖျောက်နိုင်ပဲ အမှတ်ကြီးတဲ့ သူတွေပါ။✂✂✂📂📁
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ အများအားဖြင့် ကိုယ့် ဘဝကို📏📐စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်နေတတ်ပါတယ်။
သူများ အကြည့်တွေကိုလည်း သည်းမခံနိုင်သလို သူ့ကို သူများတွေက စိတ်ထဲမှာ🚴🏇🚴🏇ဘယ်လိုထင်နေမလဲ ဆိုတာကို အမြဲ သိချင်နေသူတွေပါ။📛📛
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို….. တောင်o_O ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲနေတတ်တယ်။
သူ့မှာ အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေ ရှိနေတာတောင်… သူများစကားကို ယုံပြီး လက်ခံတတ်တဲ့အတွက် အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း စဉ်းစားနေတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်။
@}-;-‘– @}-;-‘-လုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဟာ အများအားဖြင့် ပြသနာဖြစ်မယ်🎻🎺🎷၊ဆုံးရှုးံမယ် ဆိုပြီး မကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲ အများအားဖြင့် တွေးလေ့ရှိတယ်။🏀⚽🏀
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို မြတ်နိုးသူတွေပါ။
🍭🍭ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ သာသာယာယာ နေသွားချင်ကြတဲ့ သူတွေပါ။
🍮ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးပေမယ့်လည်း တောင်းပန်ရမှာကိုတော့ သေလောက်အောင် မုန်းတယ်။
သူအမှားတစ်ခု လုပ်မိပြီ ဆိုရင်လည်း နောင်တရမဆုံး ဖြစ်နေတတ်တာ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေပါ♕ ♕ ❆
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ သူတစ်ပါးအပေါ် မှာကျတော့….. ဦးစားပေးတတ်တယ်။ ..❦ ❦ သနားတတ်တယ်။
❦ ❦ အားနာတတ်တယ်။❦ ❦ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မိသားစု အပေါ်မှာတော့ အနိုင်ယူချင်တယ်။
♨ ♨ ♨ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေကို ချစ်သူခင်သူလည်း ပေါသလို❦ ❦ အပေါင်းအသင်းလည်း များပေမယ့် ….အများအားဖြင့် တစ်ယောက်တည်း နေရတာကိုပဲ…
သဘောကျပြီး တစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်🍑🍑👲👳👲👳
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေက ဒေါသကလည်း အရမ်းကြီးတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်မဆိုး တတ်ပါဘူး။
☺☺စိတ်ကလည်း အရမ်းမြန်တယ်။ သူမှန်တယ် ထင်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။ ဘာမဆို လုပ်ရဲတယ်။
ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်း ဇွတ်လုပ်တတ်တယ်။ 😄😃သူ့ကို မခံချင်အောင်၊… ဒေါသထွက်အောင် မထိတထိ သွားလုပ်တဲ့သူတွေဆို …အရွဲ့ပြန်တိုက်ရမှကို ကျေနပ်တယ်။
စိတ်တိုနေပြီဆိုရင်တော့ 😠😠မျက်နှာထားက တင်းတင်းနဲ့ တစ်လောကလုံး သူ့လုပ်စာကိုပဲ ထိုင်စားနေရသလို 😡😡 ဘယ်သူနဲ့မှကို စကား မပြောချင်တော့ဘူး😷😷😷😷😷
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ သူများအပေါ်မှာလည်း ကိုယ့် သိက္ခာ အကျခံပြီးတော့ကို ကူညီပေးတတ်တဲ့ သူတွေပါ။
မိသားစုနဲ့ ပတ်သတ်ရင်လည်း သံယောဇဉ်အရမ်းကြီးပြီး ခင်တွယ်တတ်တယ်။😘😘
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ ချစ်သူအပေါ်မှာလည်း…. ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကူးထက် ချစ်သူရဲ့ စိတ်ကူးကို ပိုပြီး ဦးစားပေး တတ်ကြပါတယ်။
😍😍😍ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုလည်း လိုတာထက် ပိုပြီးတော့ သဝန်တို တတ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာ ရှိတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောရဲကြဘူး➳ ➳ ➳
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ ချစ်သူကို အရမ်းချစ်သလောက် မြတ်နိုးသလောက် ဂရုစိုက်သလောက် ကြင်နာ သလောက် တွယ်တာသလောက် အလေးထားသလောက် နားလည်မှု တွေခွင့်လွှတ်မှုတွေရှိသလောက် အများအားဖြင့် သူ့ချစ်သူအပေါ် သူပေးနိုင်သလောက် ပြန်မရတတ်ကြပါဘူး😥😥
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက် ပိတောက်ဆို ပိတောက်ပါပဲ??????
ဘူးဆို ဖရုံမသီးတတ်ပါဘူး 😎😎စိတ်ခံစားမှုကလည်း အရမ်းပြင်းထန်တဲ့အတွက် ချစ်သူနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမဟုတ်တာ လေးကအစ စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်း ခံစားတတ်ပါတယ်။😩😫
သူတို့တှဟော အပွငျပနျးမှာ ခကျထနျ ကွမျးတမျးတယျ ထငျရပမေယျ့ 🎋🎋အတှငျးစိတျ သဘောထားကတော့ အလှနျ နူးညံ့ သိမျမှပေ့ါတယျ?🔮🔮
ပှစိပှစိလုပျတာကတော့ ဝါသနာပါ :-p သူမြားကို ကူညီလိုကျလို့ ကိုယျ့မှာ သုညဖွဈသှား ခဲ့ရငျတောငျ ကိုယျကူညီလိုကျတဲ့သူ အဆငျပွနေတေယျဆိုရငျ ကွညျနူးပီတိ ဖွဈနတေတျတဲ့ သူတှပေါ📲🔈🔉
🎆သူတို့ဟာ စိတျဆိုးစိတျကောကျလညျး လှယျပါတယျ။ ခဏခဏလညျး စိတျဆိုးစိတျကောကျ တတျပါတယျ😩😫
စိတျကောကျလညျး ခဏပဲ။ ခြော့မယျ့သူရှိရငျတော့ ဟနျအမူပိုပွီး ဆကျပွီးတော့ စိတျကောကျဟနျ… ဆောငျနတေတျပါတယျ ။ခြော့မယျ့သူ မရှိရငျတော့ သူ့အလိုလို ပြော့သှားရော😂
🎋🎉🎊 အခဈြလညျး အရမျးကွီးပါတယျ။🎈🎌🔮 ဒါပမေယျ့ အခဈြစိတျကွီးတော့ ဘယျလောကျကွီးတဲ့ အပွဈဖွဈဖွဈ စိတျရှညျသညျးခံပွီး နားလညျခှငျ့လှတျ ပေးနိုငျတဲ့ သူတှပေါ။ 🎤
🎤🎧🎧ဒါပမေယျ့ စိတျထဲမှာတော့ မတငျမကနြဲ့ အမွဲသံသယ ဖွဈနတေတျတယျ။ ဖွဈခဲ့သမြှ အတိတျတှကေိုတော့ အမွဲ မမဖြေ့ောကျနိုငျပဲ အမှတျကွီးတဲ့ သူတှပေါ။✂✂✂📂📁
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှဟော အမြားအားဖွငျ့ ကိုယျ့ ဘဝကို📏📐စိတျညဈစရာ ကောငျးတယျလို့ ထငျနတေတျပါတယျ။
သူမြား အကွညျ့တှကေိုလညျး သညျးမခံနိုငျသလို သူ့ကို သူမြားတှကေ စိတျထဲမှာ🚴🏇🚴🏇ဘယျလိုထငျနမေလဲ ဆိုတာကို အမွဲ သိခငျြနသေူတှပေါ။📛📛
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှဟော တဈခါတဈလေ ကိုယျ့ကိုယျကို….. တောငျo_O ယုံကွညျဖို့ ခကျခဲနတေတျတယျ။
@}-;-‘– @}-;-‘-လုပျလိုကျတဲ့ ကိစ်စတဈခုဟာ အမြားအားဖွငျ့ ပွသနာဖွဈမယျ🎻🎺🎷၊ဆုံးရှုးံမယျ ဆိုပွီး မကောငျးတဲ့ဘကျကပဲ အမြားအားဖွငျ့ တှေးလရှေိ့တယျ။🏀⚽🏀
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှဟော ငွိမျးခမျြးခွငျးကို မွတျနိုးသူတှပေါ။
🍭🍭ဖွဈနိုငျရငျ ကိုယျတဈယောကျတညျးပဲ ငွိမျးခမျြးစှာ သာသာယာယာ နသှေားခငျြကွတဲ့ သူတှပေါ။
🍮ငွိမျးခမျြးရေးကို မွတျနိုးပမေယျ့လညျး တောငျးပနျရမှာကိုတော့ သလေောကျအောငျ မုနျးတယျ။
သူအမှားတဈခု လုပျမိပွီ ဆိုရငျလညျး နောငျတရမဆုံး ဖွဈနတေတျတာ နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှပေါ♕ ♕ ❆
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှဟော သူတဈပါးအပျေါ မှာကတြော့….. ဦးစားပေးတတျတယျ။ ..❦ ❦ သနားတတျတယျ။
❦ ❦ အားနာတတျတယျ။❦ ❦ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့မိသားစု အပျေါမှာတော့ အနိုငျယူခငျြတယျ။
♨ ♨ ♨ နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှကေို ခဈြသူခငျသူလညျး ပေါသလို❦ ❦ အပေါငျးအသငျးလညျး မြားပမေယျ့ ….အမြားအားဖွငျ့ တဈယောကျတညျး နရေတာကိုပဲ…
သဘောကပြွီး တဈယောကျတညျးပဲ ဖွဈနတေတျပါတယျ🍑🍑👲👳👲👳
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှကေ ဒေါသကလညျး အရမျးကွီးတတျတယျ။ ဒါပမေယျ့ တျောရုံတနျရုံ စိတျမဆိုး တတျပါဘူး။
☺☺စိတျကလညျး အရမျးမွနျတယျ။ သူမှနျတယျ ထငျရငျ ဘယျသူ့ကိုမဆို ရငျဆိုငျရဲတယျ။ ဘာမဆို လုပျရဲတယျ။
ကိစ်စတဈခုကို လုပျခငျြပွီဆိုရငျလညျး ဇှတျလုပျတတျတယျ။ 😄😃သူ့ကို မခံခငျြအောငျ၊… ဒေါသထှကျအောငျ မထိတထိ သှားလုပျတဲ့သူတှဆေို …အရှဲ့ပွနျတိုကျရမှကို ကနြေပျတယျ။
စိတျတိုနပွေီဆိုရငျတော့ 😠😠မကျြနှာထားက တငျးတငျးနဲ့ တဈလောကလုံး သူ့လုပျစာကိုပဲ ထိုငျစားနရေသလို 😡😡 ဘယျသူနဲ့မှကို စကား မပွောခငျြတော့ဘူး😷😷😷😷😷
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှဟော သူမြားအပျေါမှာလညျး ကိုယျ့ သိက်ခာ အကခြံပွီးတော့ကို ကူညီပေးတတျတဲ့ သူတှပေါ။
မိသားစုနဲ့ ပတျသတျရငျလညျး သံယောဇဉျအရမျးကွီးပွီး ခငျတှယျတတျတယျ။😘😘
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှဟော ခဈြသူအပျေါမှာလညျး…. ကိုယျ့ရဲ့ စိတျကူးထကျ ခဈြသူရဲ့ စိတျကူးကို ပိုပွီး ဦးစားပေး တတျကွပါတယျ။
😍😍😍ကိုယျခဈြတဲ့သူကိုလညျး လိုတာထကျ ပိုပွီးတော့ သဝနျတို တတျကွတယျ။ ပွီးတော့ စိတျထဲမှာ ရှိတာကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး မပွောရဲကွဘူး➳ ➳ ➳
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှဟော ခဈြသူကို အရမျးခဈြသလောကျ မွတျနိုးသလောကျ ဂရုစိုကျသလောကျ ကွငျနာ သလောကျ တှယျတာသလောကျ အလေးထားသလောကျ နားလညျမှု တှခှေငျ့လှတျမှုတှရှေိသလောကျ အမြားအားဖွငျ့ သူ့ခဈြသူအပျေါ သူပေးနိုငျသလောကျ ပွနျမရတတျကွပါဘူး😥😥
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှဟော တဈယောကျဆို တဈယောကျ ပိတောကျဆို ပိတောကျပါပဲ??????
ဘူးဆို ဖရုံမသီးတတျပါဘူး 😎😎စိတျခံစားမှုကလညျး အရမျးပွငျးထနျတဲ့အတှကျ ခဈြသူနဲ့ ပတျသတျပွီး ဘာမဟုတျတာ လေးကအစ စိတျထဲမှာ ဝမျးနညျး ခံစားတတျပါတယျ။😩😫
ဗိုလ်ချုပ် အစ်ကို ဦးအောင်သန်းပြောတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကလေးဘဝ ဗိုလ်ချုပ် အစ်ကို ဦးအောင်သန်းပြောတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကလေးဘဝ ကျွန်တော်သုံးနှစ် ခြောက်လငါးရက်သားအရွယ် ရောက်သောအခါ ညီကလေးတယောက်ရပါသည်။ ထို့နေ့ကို ကောင်းစွာမှတ်မိပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ခါတိုင်းည များတွင် မိခင်နှင့်အတူ အိပ်ရာထဲ၌ သေးပါလေ့ရှိပါသည် ထိုညတွင်ကား ဖခင်နှင့်အတူ အိပ်ရ၍ …
၇ ရက်သားသ္မီးများ ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများ 💫 ❝ ပုံ​လေး​တွေကို ​ကြည့်​​ပေးပါ။ ပုံ နှင့်​သက်​ဆိုင်​​သော ၇ ရက်သားသ္မီးများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများကို ပုံ​လေးနဲ့အတူ တပါတည်း ​ရေးသား​ပါတယ်​ ခင်​ဗျာ။ တနင်္ဂနွေသား သမီးတို့၏အကြောင်းသိကောင်းစရာ တနင်္ဂနွေနေ့နာမ်များဟာ လူ့ဘဝကိုစရောက်ပီဆိုကတည်းကစိတ်ကြီးတယ်။ ငိုလွယ်တယ် ဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်။ ပျော်ပျော်လည်းနေတတ်သလို။ ဒေါသဖြစ်ရင်လည်း …
တာလီဘန်အကြမ်းဖက် များဖျက်ဆီး ခဲ့ သည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပုံတော် ကို ဆလိုက်မီးဖြင့် ပုံေ ဖ်ာပြသ
တာလီဘန်အကြမ်းဖက် များဖျက်ဆီး ခဲ့ သည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပုံတော် ကို ဆလိုက်မီးဖြင့် ပုံေ ဖ်ာပြသ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ဗုံးခွဲ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေရဲ့နေရာမှာ ဆလိုက်မီးနဲ့ ရုပ်ပွားတော်ပုံတော်ကို ပြန်ဖော်ပွဲတခုကို ဇွန် ၆ ရက်နဲ့ ၇ …